10 Talooyin gaar ah College Ardayda
Codsashada in college kasta waxa la siiyaa oo kaliya in saaxadda ah ee tacliinta sare. xirfadiisa Your ku xiran tahay ilaa xad sare on tayada waxbarashada oo aad ka heli in aad noloshaada college, sidaas college wanaagsan waa lagama maarmaan in waxbarasho tayo leh. Waa in aad aad u dooneysa inay baadhaan iyo dooran college wanaagsan waxbarasho tayo leh. Maqaalkani waxa uu ku siinayaa talooyin dhamaystiran halka doorashada iyo xulashada kulliyadda a.
Sidaa awgeed, Waxaan ahay micneeyey maqaalka ah oo ay ku jiraan talooyin oo arday kasta waa in hay isaga / iyada maskaxdaada ka hor codsanaya iyo la dooranayo kulliyad leh waxbarasho tayo leh iyo xirfado fiican.
• Doorashada kulliyad ama jaamacad wanaagsan waxaa si aad u hesho meel aad dareento ku qanacsan in aad naftaada degmnada. Sidaas, raadiyo kulliyadda taas oo sumcad ku field of waxbarashada, oo adiga kugu habboon.
• Ka hor inta codsanaya in kulliyad kasta, marka hore arki waydaarsanayeen ee kulliyadaha ugu wanaagsan ee kaalinta ku saabsan beertaada ku saabsan waxbarashada.
• Waa in aad u yaqaana go'aanada iyo tallaabooyinka si aad u hesho galaa aad. Haddii aad ku guulaystaan ​​xulashada kulliyadda a, waa in aad codsato sida ugu dhaqsaha badan oo ka dhigi jirin dib u dhac.
• Waa inaad awoodid inaad u kala go'aamo hore iyo tallaabooyinka hore. Waa in aad badnaayeen ku yeeshaan gaadhista go'aamo deg deg ah soo raacay by falalka deg deg ah. Waxaa intaa dheer, sidoo kale waa in aad si waajibaadka iyo waajibaadka aad qeexay college nool. Ka hor inta helitaanka oggolaanshaha ah, hubi in aad awoodo in aad raacdo xeerasha iyo qaanuunka ee jaamacadda.
• Ha iloobin in aad ka akhriyi dib u eegista ah ee ardayda ku saabsan tayada waxbarashada ee jaamacadda.
• Haddii codsigaaga la aqbalo, waa in aad la soo dhaqsaday in fulinta oo dhan shuruudaha kale.
AKHRI SIDOO KALE: 5 Talooyin College Waayeelka Raadinta ay Job First
• Inta badan la weydiiyo su'aalo ku bixiyaan gudaha macluumaad ku saabsan kulliyadaha. Sidaas, halka Boogaadin kulliyad, ha iloobin in ay dhex maraan su'aalahan si aad naftaada u baro xeerarka iyo qawaaniinta ee kulliyadda, koorsooyinka ay bixiyaan kulliyadda, marka inaad ku xereyso codsiga, siyaasadda dhaafitaanka ujrada(Haddii mid ka mid), iyo qaar ka mid ah macluumaadka kale ee sida fiican u.
• Raadi kulliyadaha qurbaankiisa xarunta lacag ka dhaafida, iyo haddii xarunta this waxaa laga heli karaa dibna ha u dhigin in ay u taraynin.
• Marka aad codsato in kulliyad, maskaxda ku hay in aad doonaysid in aad la musharixiinta badan dugsiyada kala duwan soo socda u tartamaan. Sidaas, waa in aad xakamayso dareemayaasha iyo diyaar u ah inay aqbalaan caqabad ku, oo isdeji si loola dagaallamo cabsi aad. laga yaabaa in lagaaga baahan yahay inaad u muuqdaan in SAT iyo ACT imtixaanada, inkastoo baaritaannada waxay keeni karaan stress, laakiin waxaad u baahan tahay inaad geesi ku sii iyo xakameeyo cabsi aad xaaladaha oo dhan.
• Had iyo jeer u tagto cilmi ballaaran halka xulashada kulliyadda a. La xidhiidh saaxiibadaa, saaxiibada qoyska, iyo ardayda hore ee koleejka si aad u hesho macluumaad ku saabsan aragti college in. Waxaa intaa dheer, waxaa jira kulliyadaha badan oo bixiya waxbarasho lacag la'aan ah si raadiyo kulliyadaha haddii aadan awoodin inaad bixiso kharashka. In maalmihii la soo dhaafay, Finland, Germany, Sweden, iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee Yurub waxaa bixiya waxbarasho lacag la'aan ah ee ardayda caalamiga ah iyo in ka badan oo ka mid ah kulliyadaha iyo jaamacadaha bixiya waxbarasho lacag la'aan ah in English, sidaa daraadeed waxa samaynta suuragal ah in tiro balaadhan oo ah ardayda ka yimi dalalka oo dhan si aad u hesho waxbarasho ee luqadda ugu used dunida ee.
Sida lagu Helo on Your College Professor ee Side Good ?
Qalad Common About Helitaanka Job a dib markii College
Sida loo Heli A College Degree Online ?
« 6 Talooyin Of Helitaanka Writers Qormo
Sida loo Heli A College Degree Online ? »